FactGem: मिनेटमा डाटा स्रोतहरू एकीकृत गर्नुहोस् ... कोड आवश्यक छैन! | Martech Zone
आइतबार, अक्टोबर 8, 2017 Douglas Karr
डाटा सिलोसमा छ। व्यवसाय र आईटी दुबै डाटा को एक एकीकृत दृष्टिकोण को मांग गरीरहेका छन् आजको व्यापार चुनौतिहरुको समाधान प्रदान गर्न। एकीकृत डाटामा एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान गर्ने रिपोर्टहरू आवश्यक हुन्छ ताकि व्यक्तिहरू उनीहरूको संगठनहरूको लागि महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू हेर्न सक्दछन् र उनीहरूको कम्पनीको सफलताको लागि महत्वपूर्ण सूचनाहरू कार्यान्वयन गर्ने र वितरण गर्ने क्षमतामा विश्वास जगाउँदछन्।
डाटा, यद्यपि बहुविध रिलेशनल प्रणालीहरू, मेनफ्रेमहरू, फाईलप्रणालीहरू, अफिस कागजातहरू, ईमेल संलग्नकहरू, र अधिकमा फैलिएको छ। किनकि डाटा एकीकृत छैन र व्यवसायहरूलाई अझै एकीकृत जानकारीको आवश्यक पर्दछ,dव्यवसायहरू "कुंडा-कुर्सी" एकीकरण गर्दछ र "हेरिरहनुहोस् र तुलना गर्नुहोस्" रिपोर्टहरू सिर्जना गर्दछ। तिनीहरू एक साइलो क्वेरी गर्छन् र परिणामहरू प्रतिलिपि गर्न एक्सेल गर्न, क्वेरी अर्को साइलो र डाटा पेस्ट गर्दछ। तिनीहरू यो प्रक्रिया दोहोर्याउँदछ जबसम्म तिनीहरूसँग रिपोर्ट छ जुन उनीहरूले हतोत्साहित बनाउन चाहेको रिपोर्ट प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस प्रकारको रिपोर्टि slow सुस्त, म्यानुअल, अविश्वसनीय, र त्रुटि प्रवण छ!
अधिकांश संगठनहरू स्वीकार गर्छन् कि उपकरणहरू र प्रविधिहरू जसले डाटा साइलो समस्या सिर्जना गर्दछ समाधानमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। नतिजा स्वरूप, पछिल्ला केही वर्षहरुमा, हामीले NoSQL डाटाबेस र टेक्नोलोजीको विस्तार देख्यौं डाटा थप एकीकृत गर्न मद्दत गर्न थप छिटो र अधिक जोसका साथ। जबकि यी शक्तिशाली नयाँ डाटाबेस र प्लेटफर्मले परम्परागत विधिहरूको तुलनामा डाटा एकीकृत गर्नमा समय कम गर्न सक्दछन्, तिनीहरू सबै विकासकर्ता केन्द्रित छन् र उनीहरूसँगै चुनौतीहरूको अर्को सेट ल्याउँछन् जुन विकास गर्न आवश्यक पर्ने सीपहरू प्राप्त गर्दा जब यसलाई पार गर्नुपर्दछ र यी प्रविधिहरूको साथ काम गर्नुहोस्। यस प्रक्रियामा अन्तर्निहित धेरै अवरोधहरू छन् परिवर्तन परिणाम अपडेट गर्न सफल हुन परिवर्तन प्रबन्धन र व्यापार प्रक्रिया अपडेट सहित।
FactGem कुनै कोड लेखी बिना डाटा एकीकृत गर्न एक तरिका प्रदान गर्दछ। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि डाटा एकीकृत गर्न सजिलो तरीका हुनुपर्दछ, र त्यहाँ छ। तिनीहरूले यो सिर्जना गरे!
FactGem मा ईन्जिनियरि team टोली एकीकरण को जटिलता ह्यान्डल को बोझ लिएको छ ताकि व्यापार प्रयोगकर्ताहरु गर्न छैन। अब, डाटा एकीकरण छलफल आईटीबाट सुरू गर्न आवश्यक छैन। नतिजाको रूपमा, फ्याक्टगेमको डाटा एकीकरण अनुप्रयोगहरू विच्छेदन साइलोहरू द्रुत रूपमा एकीकृत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ पहिलेको विच्छेदन गरिएको डाटामा एकीकृत रिपोर्टहरू डेलिभर गर्न।
के यो तल आउँछ भन्ने हो कि हामी यो असम्भव समस्यालाई टेक दृष्टिकोणबाट समाधान गर्‍यौं, तर के हामी वास्तवमै प्रदान गरिरहेको छौं व्यापार समाधान हो। सीईओ मेगन Kvamme
डाटा एकीकृत गर्दा, तिनीहरू तपाईंको डाटा पहिले नै मोडल गरिएको छ भन्ने धारणाबाट सुरू हुन्छ। तपाईको संगठनमा धेरै स्मार्ट व्यक्तिहरू, र सम्भावित विक्रेताहरू जसबाट तपाईंले अनुप्रयोगहरू र समाधानहरू खरीद गर्नुभयो, यी मोडेलहरू सिर्जना गर्नुभयो। एन्टिटीहरू र सम्बन्धहरू तपाईंले ख्याल गर्नुहुन्छ र तपाईंको डाटा साइलोमा प्रत्यक्ष एकीकृत गर्न चाहनुहुन्छ। तिनीहरू ग्राहकहरू, अर्डरहरू, लेनदेन, उत्पादनहरू, उत्पादन लाइनहरू, प्रदायकहरू, सुविधाहरू, र अधिकजस्ता देखिन्छन्। तिनीहरू यी संस्थाहरूमा डाटा अनलक गर्न र तिनीहरूलाई एक रिपोर्टमा एकीकृत गर्न चाहन्छ जसले अर्थपूर्ण ब्यापार अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। FactGem को साथ, यो एक साधारण कार्य हो।
यदि तपाइँ ह्वाइटबोर्डमा तपाइँको संगठनको लागि निकायहरू र सम्बन्धहरू चित्रण गर्न सक्नुहुनेछ, तपाइँ आफ्नो डेटा एकीकृत गर्न FactGem प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो सजिलो छ।
FactGem को साथ डाटा एकीकृत गर्न, व्हाइटबोर्डआरबाट सुरू गर्नुहोस्। यस अनुप्रयोगमा, ड्र्याग एण्ड ड्रप एन्टिसेन्ट्स र सम्बन्धहरू यसलाई एकीकृत डाटाको लागि तार्किक मोडेल सिर्जना गर्नका लागि यसलाई "व्हाइटबोर्डिंग" बाट ब्राउजरमा। व्हाइटबोर्डआरमा, परिभाषित गर्नुहोस् कुन विशेषताहरू जुन तपाईं प्रत्येक इकाईसँग संगत गर्न चाहनुहुन्छ, र तपाईंलाई केवल तपाईंलाई मोडेल चाहिन्छ जस्तो तपाईंलाई आवश्यक छ। तपाईंले सुरु गर्नु अघि प्रत्येक इकाईसँग सम्बन्धित प्रत्येक एट्रीब्यूट थाहा छैन। तपाईले सबै सिलोहरू र श्रोतहरू थाहा पाउनु हुँदैन तपाई अन्ततः एकीकृत गर्न चाहानुहुन्छ। उत्तम अभ्यास भनेको केहि सिलोहरूको लागि मोडेल सिर्जना गरेर सुरु गर्नु हो जुन तपाईंलाई थाँहा छ कि एकीकृत रिपोर्ट प्रदान गर्न सकिन्छ - र तपाईंको व्यवसायलाई तत्काल मूल्य। तपाईंको संस्था, तिनीहरूको विशेषता, र एक अर्कामा उनीहरूको सम्बन्धको नक्शा बनाउनुहोस्। तपाईं इन्टिटी अनौंठो बनाउने र कुन सम्बन्धको कार्डिनलिटी अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूको सम्बन्धमा हुनुपर्दछ भनेर परिभाषित गर्न तपाईं व्यावासायिक नियमहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। एक पटक यो मोडल सिर्जना भयो, तपाईं मोडेल तैनात गर्नुभयो ताकि यो म्यापआरमा प्रयोग गर्न सकियोस्।
जबकि व्हाइटबोर्डआरले तपाईंलाई एक एकीकृत, एकीकृत, उद्यम-व्यापी व्यावासायिक मोडेल परिभाषित गर्न अनुप्रयोग प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, म्यापआरले तपाईंलाई एकीकृत व्हाइटबोर्डआर मोडेलमा डाटाको बिभिन्न अनोखा साइलोहरू नक्शा गर्न अनुमति दिन्छ। म्यापआरमा, तपाईं डेटा स्रोत नमूना गर्न सक्नुहुनेछ र म्यापिingsहरू सिर्जना गर्न सुरू गर्नुहोस्। मानौं कि एउटा साइलोको स्रोतमा तपाईसँग विशेषता छ कस्ट_आईडी र अर्को साइलोमा तपाईसँग विशेषता छ सदस्य_आईडी, र तपाईंलाई थाहा छ यी दुबै ग्राहकको सन्दर्भमा। म्यापआरको साथ तपाई यी दुबै विशेषताहरू एकीकृत गुणमा नक्सा गर्न सक्नुहुनेछ ग्राहक_आईडी तपाईले पहिले नै एकीकृत व्हाइटबोर्डआर मोडेलमा परिभाषित गरिसकेका छौं। तपाईंले स्रोतको लागि ख्याल गर्ने विशेषताहरू नक्शा गर्ने बित्तिकै, म्यापआरले त्यसपछि त्यो साइलोबाट फाईलहरू आयात गर्न सक्दछ र यो स्वचालित रूपमा ह्वाइटबोर्डआर मोडेलमा एकीकृत हुनेछ र एकीकृत दृश्यमा तुरून्त प्रश्नमूलक हुनेछ। तपाईं स्रोतहरू नक्शा गर्न जारी राख्न सक्नुहुनेछ र यस तरीकाले डाटा in घूस नगर्नुहोस् जबसम्म तपाईं आफ्नो एकीकृत दृश्यको लागि डाटा चाहानुहुन्न।
व्हाइटबोर्डआर र म्यापआरको साथ, तपाईं बचत गर्न सक्नुहुनेछ, संस्करण, र तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको मोडेलहरू निर्यात गर्नुहोस्। यी मोडेलहरूको मूल्य छ कि तिनीहरू व्यवसायलाई मद्दत गर्नको लागि डिकोडर रिंग बन्न सक्छन् र आईटीलाई उनीहरूको स of्गठनको डाटाको ज्ञान, यसमा कसरी प्रयोग गर्ने, र यो कसरी सिलोहरू मार्फत प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउन मद्दत गर्दछ। यी मोडेलहरू नयाँ डाटा डिप्लोयमेन्टहरू र पुन: प्लेटफर्मिंग पहलहरूलाई उनीहरूको सफलताको ग्यारेन्टी गर्न मद्दत गर्न पनि मद्दत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एक पटक डाटा लोड भएपछि, बिल्डआरले तपाईंलाई ब्राउजरमा तपाईंको एकीकृत डाटा भरमा छिटो सरल, प्रश्न सोध्ने ड्यासबोर्ड सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। कनेक्टरले तपाईंलाई झांकी र अन्य BI उपकरणहरूको लागि वेब डाटा कनेक्टर तैनाती गर्न दिन्छ ताकि तपाईं आफ्नो उपकरणहरू अब एकीकृत डाटामा रिपोर्ट गर्नका लागि पनि लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ।
किनभने फ्याक्टगेमले डाटा एकीकरणको भारी लिफ्टि does गर्दछ, र किनकि तपाईसँग केवल मोडल गर्नुपर्दछ र तपाईलाई चाहिने कुरा नक्शा गर्नुपर्दछ, तपाईलाई चाहिने डाटा, डाटा एकीकरण र अन्तर्दृष्टिको वितरण अविश्वसनीय रूपमा छिटो छ। यो वास्तविक जीवनमा कस्तो देखिन्छ?
यहाँ के सामान्य FیکٹGem डाटा एकीकरण जस्तो देखिन्छ:
पछिल्लो गर्मीमा, एक फार्च्युन Ret०० फुटकर विक्रेताले फ्याक्टजेममा सम्पर्क गरे, उनीहरूले सहयोगको लागि सोधे किनभने उनीहरूले एक विशाल सीआरएम प्रयोग गरिरहेका थिए र अन्य स्थानहरूबाट डाटा तान्नका लागि अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न कोशिस गरिरहेका थिए। उनीहरूको प्रमुख डाटा साइन्टिस्टलाई स्टोर, ई-कमर्स र ग्राहक डाटा गोदाम जानकारी सजिलैसँग मिलाउन आवश्यक थियो "बुझ्ने ग्राहक को हो?"
FactGem ले २ 24 घण्टामा डेलिभरी गर्ने वचन दिए तिनीहरूले सबै भण्डारहरू र ग्राहकहरूमा लि linked्क गरिएको मोडेल निर्माण गरे, नयाँ अन्तरदृष्टि देखा पर्‍यो, र २ it होइन, hours घण्टामा गरे! र त्यसैले । । । रिटेलमा ग्राहक # १ पैदा भएको थियो। तिनीहरू single घण्टामा एकल शहर हेरेर देशभरि हेरेका छन्, हजारौं स्टोरहरू, दशौं लाखौं ग्राहक र टेराबाइट डाटा - र यो सबै एक दिनको काममा गर्दै। रिटेल, वित्तीय सेवाहरू, र निर्माणमा अन्य पनि अब उनीहरूको संगठनहरूमा FactGem का फाइदा हेर्न र महसुस गर्न थालेका छन्।
टेक्नोलोजीको बिन्दुमा पुगेको छ जहाँ अब यो ईन्जिनियरहरूको एक्लो दृश्य हुन हुँदैन। आधुनिक डाटा एकीकरण यति गाह्रो छैन तपाईंको IT विभाग तपाईंलाई विश्वास गर्न चाहन्छ। CTO क्लार्क रिची
FactGem को व्हाइटबोर्डआर मोड्युल कुनै कोडको प्रयोग बिना नै भिन्न डाटा स्रोतहरू जडान गर्दछ।
अधिक जान्नको लागि FیکٹGem हेर्नुहोस्
टैग: क्लार्क रिचीडेटा एकीकरणतथ्यांकएकीकरणम्यापरमेगन Kvammeव्हाइटबोर्डर